21 | May | 2012 | Dr Ko Ko Gyi's Blog
တို့ဗမာ ဗုဒ္ဓဘာသာ အမျိုးသားတိုင်းပြည် တပ်မတော်အစိုးရဟာ အမျိုးသား ရေးကို လူမျိုးရေး ဘာသာရေးနဲ့ ရောထွေးပစ်တဲ့ အမြင်ကျဉ်း အစွန်းရောက် အာဏာရှင်အစိုးရပါ
EXTRACTS FROM: အမျိုးသားရေးကို ဘယ်သူရှုပ်ထွေးစေခဲ့တာလဲ (ဆောင်းပါး) …တကောင်းသား from Myanmar Muslim.net
(တို့ဗမာ ဗုဒ္ဓဘာသာ အမျိုးသားတိုင်းပြည် တပ်မတော်အစိုးရဟာ အမျိုးသား ရေးကို လူမျိုးရေး ဘာသာရေးနဲ့ ရောထွေးပစ်တဲ့ အမြင်ကျဉ်း အစွန်းရောက် အာဏာရှင်အစိုးရပါ)
အမျိုးသားရေးလို့ ဆိုလိုက်တာနဲ့ ဒါဟာ နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ လူ့အဖွဲ့အစည်းကြီးရဲ့အရေးကို ရည်ညွှန်း ပြောဆိုလိုက်တာပဲလို့ အများက နားလည်ထားပြီးသားပါ။ နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ လူ့အဖွဲ့အစည်းဆိုတဲ့နေရာမှာ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံနဲ့ တစ်နိုင်ငံ မတူကွဲပြားတဲ့ အခြေခံတွေ ရှိကြတာကို တွေ့ရမှာပါ။ တချို့နိုင်ငံတွေမှာ နိုင်ငံသားအားလုံးဟာ လူမျိုးတစ်မျိုး တည်း ဖြစ်တဲ့အတွက် အဲဒီလူမျိုးရဲ့အမည်ကို နိုင်ငံတော်ရဲ့အမည်အဖြစ် မှည့်ခေါ်လိုက်တယ်။ ဥပမာ- တရုတ်၊ ကိုးရီးယား၊ ဂျပန်၊ ဆော်ဒီ အာရေးဗီးယား စသဖြင့် . . .
အဲဒီနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ လူ့အဖွဲ့အစည်းမှာ လူမျိုးတစ်မျိုးတစ်စားတည်းကို အခြေခံတဲ့ အခြေအနေမှာ မဟုတ်တဲ့ တခြားနိုင်ငံတွေကျတော့ ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံအဖြစ် ရပ်တည်ကြတယ်။ ဥပမာ- အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု၊ ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံတော် စသဖြင့်။
ဆိုချင်တာက ပြည်ထောင်စုဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းကိုယ်နှိုက်က လူမျိုးတစ်မျိုးပိုင် နိုင်ငံမဟုတ်ကြောင်း ထင်ရှားပြီး ဖြစ်နေတာကိုပါ။
My grandson’s name is Kayden Shah
(born 18th. May 2012)
Kayden = meaning and name origin
Kayden \_ ka(y)-den\_ asaboy’s name isavariant of Cade (Old English, Old French) and Kaden (Arabic), and the meaning of Kayden is “round, gentle; cask; companion”. …
The baby name Kayden sounds like Kaeden, Kaydon, Kaydin, Kaydan, Kaiden and Cayden. Other similar baby names are Kayde, Hayden, Jayden, Kamden and Kayven.
Origin and Meaning of the Name Shah Gender:Boy
Origin: Persian. Meaning: King, emperor
Origin: Indian. Meaning: King, emperor
Tags:Kayden, Old English, Old French
Archives Select Month September 2018 (1) August 2018 (3) May 2018 (3) April 2018 (1) March 2018 (1) January 2018 (1) December 2017 (1) November 2017 (2) July 2017 (3) May 2017 (2) April 2017 (4) March 2017 (1) February 2017 (1) January 2017 (1) December 2016 (2) November 2016 (2) October 2016 (1) September 2016 (1) August 2016 (6) July 2016 (4) June 2016 (3) May 2016 (7) April 2016 (2) February 2016 (2) January 2016 (5) December 2015 (6) November 2015 (1) October 2015 (17) September 2015 (9) August 2015 (11) July 2015 (8) June 2015 (9) May 2015 (29) April 2015 (68) March 2015 (106) February 2015 (89) January 2015 (90) December 2014 (111) November 2014 (188) October 2014 (182) September 2014 (135) August 2014 (72) July 2014 (154) June 2014 (49) May 2014 (114) April 2014 (199) March 2014 (338) February 2014 (279) January 2014 (240) December 2013 (159) November 2013 (230) October 2013 (212) September 2013 (185) August 2013 (149) July 2013 (235) June 2013 (198) May 2013 (254) April 2013 (340) March 2013 (233) February 2013 (139) January 2013 (80) December 2012 (109) November 2012 (204) October 2012 (227) September 2012 (118) August 2012 (122) July 2012 (90) June 2012 (167) May 2012 (52) April 2012 (64) March 2012 (32) February 2012 (16) January 2012 (50) December 2011 (19) November 2011 (19) October 2011 (26) September 2011 (30) August 2011 (29) July 2011 (57) June 2011 (28) May 2011 (39) April 2011 (37) March 2011 (23) February 2011 (34) January 2011 (48) December 2010 (96) November 2010 (56) October 2010 (44) September 2010 (37) August 2010 (47) July 2010 (34) June 2010 (20) May 2010 (17) April 2010 (37) March 2010 (21) February 2010 (12) January 2010 (24) December 2009 (14) November 2009 (30) October 2009 (49) September 2009 (24) August 2009 (4) July 2009 (4) June 2009 (6) May 2009 (8) April 2009 (8) March 2009 (34) February 2009 (3)
Please pray for my mother who just passed away today
Eid prayers around the world
Patriotic song ‘Setia’
World’s Top Five Racist Countries